ပြန်လည် နိုးထခွင့်ရခဲ့ရင် ……………….. | PoemsCorner
ပြန်လည် နိုးထခွင့်ရခဲ့ရင် ………………..
ခု ..ဘယ်မှာ … ဘယ်မှာလဲကွယ်
တဒင်္ဂ ချိုမြိန်မှုရေ …
မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် အိပ်မက်ထဲ
သန်းခေါင်က နက်ရှိုင်းစွာ ထွေးပိုက်တယ်
ရုတ်တရက် …. အေးစက်
ပျံ သန်း .. ကွယ် ပျက်
လပြည့်ဝန်းလေး ဖူးပေးပါ …
ထာဝရ သိမ်းဆည်းချင်လို့ ….
မူးယစ် မှင် သက်
ရှင်လျက် … သေဆုံး
သိမှတ်မဲ့စွာ ပြုံးရွှင်နိုးပါရစေတော့ ……
ချီရွန် ( ပုလဲ)
နောက်ထပ် ကျနော့်ရဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာပါ။ ခံစားပေးကြပါဦး။ မူရင်း ကဗျာကို မမှီရင် ကျနော် ညံ့လို့သာ ဖြစ်ပါကြောင်းးးးးး
In: ကဗျာ Posted By: chiron Date: Feb 19, 2013
Leave comment9Comments & 394 views
By: ei lay at Feb 20, 2013
ကျေးဇူးတယ်ပါတယ် ညီမလေး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးတဲ့သူရှိတော့ ဝမ်းသာရပါတယ်။ ကိုယ့်ကဗျာ မဟုတ်ဘဲ သူများကဗျာ ဘာသာပြန်ထားရတာဆိုတော့ တော်တော်လေး အားထုတ်ထားတာ အသိအမှတ်ပြုပေးတဲ့အတွက်ပါ။
By: ChIr0N at Feb 20, 2013
ဘာသာပြန်တာဘယ်လောက်ခက်တယ်ဆိုတာ အိ သိတာပေါ့
ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်ဖို့ ဘယ်လောက်အားထုတ်ရမယ်ဆိုတာလည်း အိကိုယ်ချင်းစာပါတယ်
အကိုက အိ တခုမှမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကို ကျွမ်းကျင်နေလို့အရမ်းအားကျမိပါတယ်
အခုနောက်တပုဒ်ကို စပြီး ဘာသာပြန်နေတယ် ညီမလေး။ မြန်မာစကားက ဝေါဟာရကြွယ်တာရယ် ပြီးတော့ စကားလုံးတစ်လုံးချင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်လှတာရယ်ကြောင့် မြန်မာလိုပြန်လို့ ပိုပြီး အဆင်ပြေနေတယ် ထင်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မူရင်း ကဗျာကို ဖတ်ကြည့်ရင်တော့ အကိုရေးထားတဲ့အတိုင်း တိုက်ရိုက် ခံစားရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ ဆိုပါတော့ သူက အပေါ်ဆုံးမှာ
မင်းရဲ့ ချိုမြိန်မှု ဘယ်မှာလဲ
ဘယ်မှာလဲ ဘယ်မှာလဲ ……. ဒါ တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပါယ်ပါ …
အဲလိုပေါ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ အတူတူပါပဲ ရေးပုံလေး စကားလုံးလေး နည်းနည်းကွာတာပေါ့။
အိကို အကို့လိုမျိုး ကြ်ိုးစားခိုင်းမှာဆိုးလို့
poems corner မှာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဖတ်ဖြစ်သွားလဲ အိကိုယ်တိုင်လည်းမသိတော့ဘူးအ
အင်း ရွာထဲမှာတော့ အဖတ်နိုင်ဆုံးနဲ့ အားလုံးကို အားပေးတာ အိလေး တစ်ယောက်ပဲ ထိပ်ဆုံးကပါ။ အကိုကတော့ ဖတ်တော့ဖတ်တယ် ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပြောရမလဲ အကုန်လုံးတော့ လိုက်မဖတ်ဖြစ်တာ အမှန်ပဲ။ အချိန်မပေးနိုင်တာလည်း ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကဗျာကို အားပေးတဲ့အတွက်ရယ် ဘဝင်လေဟပ်အောင် ပြောပေးတဲ့အတွက်ရယ် ကျေးဇူးပါ။ =)
By: ChIr0N at Feb 21, 2013
သာသာပြန် ကဗျာတွေကို သိပ်ကြိုက်တယ်ဗျ.။ အကိုချီရွန်ကလည်း ဘာသာပြန်တွေ လှတယ်.။ ပိုကောင်းသွားတာပေါ့..
By: နိုးဆက် at Feb 21, 2013
အင်း ကျေးဇူးပါ ညီလေး။ နောက်တပုဒ်က တော်တော် စားနေတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆရာပူရ်ှကင်န် က သူ့ မိန်းမအတွက် ရေးပေးတဲ့ ကဗျာဆိုတော့ စကားလုံးတွေ သိပ်နုနေတယ်။ အကို တော်တော် ကြိုးစားရမယ် ထင်တယ်။ တင်ရင် အားပေးပါဦး ဟိဟိ။ ကြိုပြီး ကြေငြာထားတာ။
ဟုတ် ကဲ့… ခင်……ဗျ 🙂
By: 13th at Feb 21, 2013